Ukusetshenziswa kwe-ejenti yokukhishwa yangaphakathi abicah embonini yokukhiqiza
I-Daily Chemical Grade Carbomer
I-Daily Chemical Grade Polyethylene Glycol
Ukuhlakazeka Kwenjoloba Yemvelo
Umenzeli Wokukhishwa Kwesikhunta Sangaphakathi Wobungani
Okwelashwa Ibanga Polyethylene Glycol
Ezemithi Ibanga I-Carbopol
Isikhathi eside, imboni yomkhiqizo iqaphela kakhulu ngokusetshenziswa kwe-ejenti engaphakathi yokukhishwa kwe-silicone. Lokhu kungahle kuhlangane kakhulu nokuqonda okuhlukile nokusetshenziswa komkhiqizo
Kukhona ukungaqondi okuningi mayelana nomenzeli wokukhishwa ku-silica gel
Eyodwa. Ngomthelela wento ephrintiwe, kulula ukudala ukwanda kwezikhathi zokuphrinta.
Okubili. Lungiselela imikhiqizo yokubopha omata abaphansi, okuholele ekunamatheleni okuncane.
3. Ukubukeka komkhiqizo kulula ukukhiqiza izindawo ezikhanyayo ngaphezulu.
4. Kulula ukudala isithwathwa.
Ngenxa yalokhu okungenhla abantu abadukisayo bavame ukuphuthelwa yithuba, ngenxa yokwesaba nokungabe besasetshenziswa, okuholela ekusebenzeni kabi kwe-ejenti yokukhishwa kwe-silicone ayikwazi ukusebenza. Eqinisweni, ukusetshenziswa kwesikhathi eside komenzeli wokukhishwa kwangaphakathi kuzokwakha ifilimu elayida isisindo esincane kusikhunta, futhi umkhiqizo kulula ukuwudiliza, ikakhulukazi imikhiqizo ye-silicone okunzima ukuyidiliza. Ukusetshenziswa okuhle komenzeli wokukhishwa kwangaphakathi kuyasiza kakhulu ekuthuthukiseni ukusebenza kahle kokukhiqiza, kepha isikhathi asisifushane, ukuhlolwa kudinga isikhathi esifanele sokuqhathanisa.
Izici ezilandelayo kufanele zenziwe kahle lapho kusetshenziswa ngokunenzuzo umenzeli wangaphakathi wokukhishwa kwesikhunta ukuthola imininingwane:
Eyodwa. Ukukhethwa kwezinto ezingavuthiwe ze-silica gel akufanele kube ukuhahela ezishibhile. (izinto zokusetshenziswa ezishibhile, noma ngabe akunankinga ngezinto zokwakha, kungahle kungazinzi ngenxa yesikhathi sabo esifushane sokuhlanza nokusebenza.)
Ukukhethwa kwe-ejenti ye-disulfide kufanele kube okulungile, ngcono ukuzinza (kunezinye izinto ezinokuhlanzeka okuphansi, lapho umkhiqizo uphekwa ngokushesha, kungcono, kepha lapho uzinza ngokwengeziwe kungcono)
3. Musa ukweqisa. (ngenxa yokungeneli kwesibabule komkhiqizo, ikakhulukazi ukukhethwa kwe-ejenti ephulukisa ngokushesha, indawo inhle kakhulu. Eqinisweni, ijika le-vulcanization alikakaqedwa, ngakho-ke kuzophuma isithwathwa, okungase kungabi imbangela yangaphakathi uyaxebuka.)
4. Sebenzisa inani elifanele. (kusiza kuphela, hhayi indima ephambili. Ukusetshenziswa okufanele kwezinto zokusetshenziswa, izinto ezisizayo kanye nobuchwepheshe bokucubungula kuzobonisa inani laso.)
Isikhathi Iposi: Nov-11-2020
Qingdao Yinuoxin okusha Material Co., Ltd.